NOS na RTL na-elebara omimi miri emi iji kpuchie ihe omimi nke aka ha: Martin Vrijland
NOS na RTL na-elebara omimi miri emi anya iji mepụta ihe omimi nke aka ha
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 September 2019	• 11 Comments
isi mmalite: superguide.nl
N’ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, ma RTL na NOS tụgharịrị ịbụ ndị na-a payinga ntị zuru oke gbasara ihe omimi miri emi. Anyị na-ahụ otu ihe merenụ ebe a na isiokwu nke 'akụkọ ụgha'. Nnukwu ndị na-emepụta akụkọ adịgboroja na nnukwu ndị na-eji teknụzụ miri emi na-aga iche ihu onwe ha site n'ikwu na òtù ndị omempụ, ndị na-eyi ọha egwu ma ọ bụ Russia bụ ndị na-eji ya. Ma n'ezie DARPA (Defense Defense Advanced Research Projects Agency bụ ụlọ ọrụ nke Ngalaba Nchekwa United States) zụlite teknụzụ onye ghotara ma mata ezigbo ihe nkiri, nke mere na usoro mgbasa ozi na-ekwukarị nwere ike ịdabere na akara mma ahụ. Nweta foto a?
Kedu onye nwere ego na akụrụngwa niile iji kpọọ ndị nwere ogbu mmiri? Kedu maka ezigbo enyi anyị John de Mol na ọtụtụ ijeri ya? Ezinaụlọ De de Mol nwere ego na ihe niile ha nwere iji nye onwe ha onyoonyo dị mma site n'aka Johnny na-enupụ isi na Linda nwere obi ụtọ. Ka ọ dị ugbu a, John de Mol bụ onye nwe Algemeen Nederlands Persb Bureau.
Mgbe John D. Rockefeller ghọrọ onye mbu ijeri na United States na ụlọ ọrụ mmanụ ya, o jiri ihe nkiri na-egosi na ọ na-ekesa ego n'okporo ụzọ. Rockefeller tụgharịrị site na akpa nchekwa a na - akpọ asị na onye ọrụ ebere hụrụ n'anya. Oge eruola mgbe imeghe anya gị nke ọma ma hụ ka hares na-eje ije na nke okporo mmiri nke na-egwu ala n'okpuru ntọala nke ịdị adị anyị. A na-ejide gị na mkpokọta Trumanshow site na mgbasa ozi, nke m gosipụtara ebe a na weebụsaịtị n'ọtụtụ ọnọdụ na ha debere njide n'ihu igwefoto ma guzobe ọgba aghara niile site n'enyemaka nke ndụ ndụ iji gosi ya na akụkọ ahụ na mgbede. (lee ebe a en ebe a). Ndị na -ezigharị akụkọ a agaghị eme ka anyị duhie ụzọ niile? Gini mere ị chere na Jeroen Pauw na Matthijs van Nieuwkerk wdg nwere ụgwọ ọnwa dị elu? N'ihi na ha bụ ndị egwu 1 nwere ọgụgụ echiche nke ụwa. A na-ahapụ ndị ọbịa tebụl a goro ego ka ha jupụta n'ọdịdị nke mkparịta ụka na nkatọ, ka ị kwenyere na "n'ezie ihe na-eme". Will gha aghugho.
Ọ dị mkpa na ị ga-amalite ịhụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi anaghị ewetara akụkọ akụkọ adịgboroja, kamakwa na-arụ ọrụ na teknụzụ miri emi. Ha na-anwa iwepụ uche gị site na onwe ha na nsogbu ndị dị ka ịpụnara mmadụ ihe ma ọ bụ vidiyo vidiyo ya na Dionne Stax. Nke ahụ bụ ihe na - akpata nchegbu ma nke ahụ bụ ebumnuche ahụ, n'ihi na ị ga - enwe nchegbu banyere 'ndị omempụ' ka gọọmentị wee nwee ike ịgbanwe iwu nke mpụ ọ bara uru. "Nsogbu, Ngwọta, Ngwọtaa na-akpọ ya maxim. Mgbe ahụ ị mepụtara nsogbu nke ọha mmadụ kwesịrị ịdị na-echebara echiche; mgbe ahụ ị na-akpasu mmeghachi omume mmetụta uche site na ndị dị ka Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk na ndị isi njikwa echiche ndị ọzọ; ka ewee nye osisa. Ozi a bu na "Inwere ike tukwasiri onyonyo nke si n’ozi mgbasa ozi na ndi nke ekwuputara." Onye na-eme taya ya na-achụsasị mbọ n’akụkụ ụzọ ụzọ ị ga-esi abanye ya, ka ị wee gakwuru onye na-ebugharị taya iji mezie ya.
Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze (OM) nwere nchegbu maka ohere nke iwere ihe nkiri a na-akpọ deepfake, nke eji algorithms na-eji foto eme ihe. Nke ahụ na-ede, NOS Satọde.
Onye ọka ikpe ọha, Lodewijk van Zwieten, na-agwa ndị NOS ichegbu onwe gi banyere odi nfe nke enwere ike ime ihe omimi miri emi. Anyị kwesịrị ịghọta na ọ bụrụ na anyị hụ ihe, anyị agaghịzi enwe ike ikwenye nke ahụ. N'oge na-adịghị anya, ị nwere ike iji anya nke uche hụ ihe mgbe ọ na-emebeghị. ”
Guo na, na ihe ndi ozo isiokwu a (na ebe a en ebe a) ka etu miri si dị kemgbe afọ na etu profaịlụ mgbasa ozi na-adịkarị ka ejiri miri emi kpuchie ya, ka gọọmentị wee nwee ike idobe ya ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ na-enyocha mkparịta ụka nke ndị na-elekọta mmadụ, zoro n'azụ profaịlụ miri emi na-ekwenye ekwenye na netwọsị na ntanetị na nkwenye foto na vidiyo. Gụchaa ya! Chee echiche nke ọma banyere ịkwado onye edemede nke na-agbatị olu ya iji mee ka ihe a niile pụta ìhè. Soro n’otu ma obu sonye n’otu onyinye otu oge ma kesaa akụkọ ndị o kwere mee. Daalụ tupu.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: futurism, e gosipụtara
Ozi ọma dị iche iche abụwo ozi adịgboroja ruo ọtụtụ iri afọ, ma anyị na-eji ya eme ihe na anyị amaghị ya
Kedu ihe ha bụ na ogologo oge ka ihe ahụ dị?
Yolanthe Cabau na usoro ndị uwe ojii, DNA, ọmarịcha John de Mol mmepụta (dịka ozi ANP)
Ndi oru mgbasa ozi na ndi dere akwukwo ma ha na ere akuko PsyOp dika ha na egosi TV?
Michael P. Thijs H. Jos B. ihe mgbasa ozi mgbasa ozi niile na-eduga ngwa ngwa iwebata iwu egwu nke na-emetụta onye ọ bụla
Tags: deepfakes, Dionne, adịgboroja, agba, john de mol, Lodewijk van Zwieten, ozi ọma, ozi ọma, OM, gba ọtọ, Stax
9 September 2019 na 12: 52
Adakwala maka mkparịta ụka na nzukọ ma ọ bụ mgbasa ozi ọha. O yikarịrị ka ị ga-agwa profaịlụ adịgboroja (miri emi) nke na-ezochite onye ọrụ steeti,
10 September 2019 na 08: 30
Echere m na DDS bụ akwụkwọ atụ nke ahụ! Tupu ịmara ya, ị nọ na mkparịta ụka na-agwụ ike nke na-agafe ka olulu biya!
Tụlee dere, sị:
9 September 2019 na 14: 30
mma a gbaghakwara n’akụkụ abụọ, ọ ga-ekwekwa ndị mmadụ ịtụ anya ihe nwere ike ime n’ọdịnihu. Iji maa atụ, onyogho nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị na-eme ihe nkiri, wdg. Ebe mmadụ nwere ike itinye aha nke miri emi
10 September 2019 na 08: 32
M na-atụ egwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ nkọwa nke adịgboroja nke miri emi. N'aka ekpe ma ọ bụ aka nri!
18 September 2019 na 15: 21
kpọmkwem ihe m chere ...
9 September 2019 na 15: 37
Ihe m juziri juo onwe m bu nke a bu omimi… 😀
9 September 2019 na 15: 40
9 September 2019 na 18: 17
.. nke a abughi ikpe ile anya n'ime iko. Onye ka na-ele nos / rtl?
10 September 2019 na 08: 22
Enweghị m ọtụtụ ihe (ọzọ) na Flits West, mana e wezụga ụfọdụ ntanye aka ọ nọ na-ekwu! Maka ndị ọzọ: Sambal na Flits?!
10 September 2019 na 08: 28
Achọkwuola m na ọ bụrụ na ndị na-ebi akwụkwọ n’akpa si Oranje ga-eji akwụkwọ ịgba ụgwọ okpukpu abụọ zoo maka mmezi na ndozigharị, wdg, na ntinye azụ maka mmachi na-abaghị uru Orange! Ihe ọ bụla Rutte kwuru, nke adịgboroja ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ gel # 1 na mbara. Ma nke kacha njọ bụ: Ọ na-ewepụ ya!
10 September 2019 na 08: 36
Chetanu na nwanne nna nna Bea van Oranje tinyere bọọlụ Rutte n'ịnyịnya. Yabụ, ya mere!
" Boris Johnson (nna nna Ottoman) nwere ike ibido ọgba aghara na Europe nke ga-ebuli Alaeze Ottoman?
Kedu mgbe US ga-akwụ ụtụ ihu igwe maka bọmbụ ndị ahụ ha tụbara? »
Nleta ha: 4.080.407
Kedu ihe Black Lives Matter, LGBTI na amanyere bụ iwu nke Covid-19 nwere?
Ngosipụta nke June 21, Willem Engel, Mordechay Krispijn, Jeroen Pols, ara nje na ihe ga-eme na-esote?
Martin Vrijland op Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland nke akpọrọ 'Coronavirus covid-19 ebe njedebe a gwụ?' dị ugbu a
Harald Pfeiffer op Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland nke akpọrọ 'Coronavirus covid-19 ebe njedebe a gwụ?' dị ugbu a
Marianne op Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland nke akpọrọ 'Coronavirus covid-19 ebe njedebe a gwụ?' dị ugbu a
ClairVoyance op Junebọchị Sọnde June 28 gosipụtara Malieveld ịhụnanya, ndidi na ntụkwasị obi netwọ nchekwa Virus Madness